कैलाश पर्वतको पहिलो ग्लेसिएरदेखि मानसरोवरको रोमाञ्चक भिडियो यात्रा-Xclusive. • ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
कैलाश पर्वतको पहिलो ग्लेसिएरदेखि मानसरोवरको रोमाञ्चक भिडियो यात्रा-Xclusive.
५८०० मिटरको पहिलो ग्लेसिएरमा, मानसरोवर परिक्रमा
प्रकाशित मिति :5September, 2019 11:17 am
मानसरोवर यात्रा हिन्दू, बौद्ध र जैन मार्गीहरुका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रतिष्ठाको विषय हो । त्यसभन्दा पनि संसारकै छानो मानिने तिब्तेन प्लेटो कस्तो होला भन्ने जान्न ल्हासा बाट झण्डै ११ सय ५० किमी दुरीको यात्रा नगरेसम्म सामान्य जानकारी पनि हुन सक्दैन ।
मानसरोवर यात्रा आम मानिसको नजरमा धार्मिक भ्रमण थियो भने मेरा लागि तिव्तेन प्लेटोको अलोकन र अध्ययन ।
माउन्ट कैलाशको पहिलो ग्लेसियरको अगाडि लेखक
सामान्यतया मानसरोवर यात्राका लागि अप्रिलदेखि जून र सेम्टेम्वर तथा अक्टोबर महिना सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ भने जुलाई र अगस्त वर्षात्को समय हुनाले बेमौस माएितापनि हामी विमानस्थल उत्रेदेखि साउन ३१ गते माउन्ट कैलाशको आधार क्षेत्रको होटल जहाँको उचाई ४६५० मिटर रहेकोसम्म आइपुग्दा पुरै घामाइलो समय प¥यो । हामी योफाङ च्या होटल आइपुग्ने बेलासम्म सबैभन्दा बढी ५,०८९ मिटरको सिला ९त्तगष्बिएबकक० पास क्रस गरेर आउँदा पनि हाम्रो टोलीका कसैलाई त्यस्तो कुनै समस्या भएन ।
साउन २९ गते दिउँसो २ बजेतिर हिंडेर साँझ नौ बजे हामी अन्राष्ट्रिय महत्वको सिगात्सेमा आएर बास बस्यौं ।
तेस्रो दिन सिगात्सेबाट झण्डै ४५० किमीको दुरीमा रहेको सागामा पुगेर बस्नु पर्ने थियो । त्यसका लागि विहानै ७ बजे नै हिंड्यौं । बीचमा पर्ने जिम्वु भन्ने स्थानमा एउटा गुम्वा पनि रहेछ । सांघाई तिव्वेत मैत्री राजमार्गको त्यो विन्दू ठ्याक्कै ५००० किमीको दूरीमा पर्दो रहेछ । त्यो रोड बनाउन सन् १९५८ मा माओत्सेतुङकै पालामा सुरु गरिएको हो ।
लात्सेमा पुगेर लन्च ग¥यौं । त्यही विन्दु रहेछ जहाँबाट कोदारी राजमार्ग अर्थात् खासा हुँदै नेपाल जाने र अर्को माउन्ट कैलाश जाने बाटो छुट्टिने रहेछ । जुन बाटो सन् १९६७ मा सम्पन्न भएको थियो । कोदारी राजमार्गले स्थलमार्गबाट चीनसँग नेपाल जोड्दा पनि छिमेक अर्को देश भारतले केही समय नाकाबन्दी लगाएको थियो । तर राजा महेन्द्रले माओ र चाओएनलाईसँग सम्वन्ध बनाएर नेपाललाई भारततर्फको परनिर्भरताबाट मुक्त गर्ने बैकल्पिक दिशा देखाएका थिए त्यतिबेलै ।
त्यो दिन हामी रातको दश बजे पुगेर सागाको होटलमा बस्यौं ।
तेस्रो दिने हाम्रो टोली सागबाट अघि बढेको थियो दारचिन का लागि ।
नमरिङको केला पास ४८८९ मिटर र सामसङपास ४८१८ मिटर पास गरेर अघि बढ्यौं । त्यस लगत्तै सिला पास सबैभन्दा बढी अल्ट्च्यिुड रहेको ५०८९ मिटर क्रस गर्दै फोटो खिच्दै अघि बढ्यो । बाटोको वरिपरिको दृश्यले केही महिना यतै बस्न पाए कस्तो हुँदो हो भन्ने छाल नआएको भने होइन । मलाई मानसरोवर यात्रा रोमाञ्चक ढंगबाट टेलिभिजनको पर्दामा पनि देखाउनु पर्ने थियो । त्यसैले सम्भावित ठाउँहरुमा आवश्यक काम पनि गरिरहेको थिएँ । यस अघि मैले चेयरमेन माओत्सेतुङको जन्मस्थान साओसान र ग्रेटवालको पनि डकुमेन्ट्री बनाएको थिएँ ।
हामी विस्तारै सिला पास गरेपछि तलतिर झरिरहेका थियौं । छेङ्ला पास ४७९७ मिटर थियो भने अर्को थोग्ला पास ४९२० मिटरको थियो । त्यहाँ पनि फोटो खिच्ने हाँसी मजाक गर्ने र टेलिभिजनको कर्मकाण्ड पनि गर्दै अघि बढ्यो । सिगात्सेबाट अघि बढेपछि देखिएका ससाना शहरहरु कति धेरै चाँडो विकासको चरम विन्दुमा पुग्ने भन्ने पर्खाइको हतारमा रहेका जस्ता देखिन्थे । हरेक सहरमा दू्रत ढँगले निर्माण कार्य भइरहको देखिन्थ्यो ।
फ¥याङ ९एचथबलन० को लोकल रेष्टुरेन्टमा लन्च ग¥यौं । त्यहाबाट अलिकति अघि बढेपछि माउन्ट अन्नपूर्ण र धौलागिरिको नेपालबाट उत्तरी तर तिव्वतबाट दक्षिणी रेन्ज देख्न सकिने थियो । त्यस हिसबाले हामी भौगोलिक रुपमा तिव्वतमा हिंडेपनि टाइम जोन र भूगोलका हिसावले नेपालकै समयचक्रमा कुदिरहेका थियौं । तिव्वतमा बेलुकाको साढे नौ बज्न लाग्दा बल्ल घाम डुब्न लाग्दथ्यो । त्यो समय भनेको नेपालमा सवा सात बजेको अवस्था हो । यद्यपि चीनको सवै क्षेत्रको टाइम जोन एउटै छ । त्यसो त रसियाको टाइमाजोन भने अहिले पनि फरक फरक स्थानको गरी ४ वटा टाइम जोन रहेको छ । त्यो नै विश्वको मौलिक समय फरक भएको देश हो ।
आज सबैभन्दा बढीको उचाई हामीले मायुम चेकपोष्ट क्रस गरेपछि मायुम्लापास ५२११ मिटर क्रस ग¥यौं । कसैलाई पनि अल्ट्च्यिुडको समस्या भएन । त्यसको लगत्तै झरेपछि फोटो खिच्ने स्थान रहेछ । त्यो मानसरोवरकै मुहानको एउटा शाखा भएर बनेको ताल रहेछ । जसलाई नानी ताल भनिन्छ । त्यो स्थानको स्थानीय नाम छेछ्याङ ९ऋजभनअजभनबलन० रहेको छ । पश्चिमा पर्यटकहरुले त्यो स्थानको नाम नै फोटो खिच्ने स्थान भएकाले कोडाक प्यलेस भन्ने राखेका रहेछन् ।
तिव्वतमा भेडा र याकको बथान
बाटोभरि याक र भेडा चरेको बथान देख्दा लोभलाग्दो लय देखिन्थ्यो । हामीले भेडा देख्ने वित्तिकै दशैंमा पुग्ने यिनै त हुन् नेपालमा भन्दै हाँसी मजाक समेत ग¥यौं । नेपालमा तिव्वतबाट दशैंका समयमा भेडा च्याङ्ग्रा गएपनि यति माथिबाट किन जान्थे र ?
बेलुका बुराङ् काउन्टीको दारचेन भन्ने माउन्ट कैलाशको बेस क्याम्प पनि भनिने गाउँ तर अहिले सहर बन्ने हतारोमा रहेको एउटा होटलको बाहिरी टेन्टमा बस्यौं ।
त्यो टेन्ट ल्हासको ल्हासा होटलभन्दा कम सुविधाको थिएन । सबै सुविधा त्यही टेन्टमा थियो ।
५८०० मिटरको पहिलो ग्लेसिएरमा
दारचेनबाट माउन्ट कैलासको वास्तविक बेस क्याम्प अर्थात् डोरापुक मोनेस्ट्रीमा पुग्न दारचेनबाट सरस्युङसम्मको ६ किमी स्थानीय यातायातबाट जानु पर्ने नियम रहेछ । त्यसका लागि पनि स्थानीय अधिकारीबाटी ग्रुप भिसाको कपी सहित कागजपत्र देखाएर अनुमति लिनु पर्दछ । त्यही बेला जर्मनीबाट आएका तीन जना मित्रहरु र हामी एउटै गाडीमा सस्र्युंसम्म गयौं । त्यहाँबाट अघि बेसक्याम्पसम्म पुग्न १६ किमी ट्रेकिङ गर्नु पर्ने थियो । हामीलाई सजिलो होस् भन्नका लागि दुई जना भरियाहरुको व्यवस्था गरिएको थियो । उनीहरुले हामीले बाटोमा खानेकुरा, अक्सिजन लगायतका सामग्रीहरु बोक्नु पर्ने थियो । विहान स्थानीय समय अनुसार साढे ९ बजेतिर हिंडेका हामी साढे दुई बेजतिर बेसक्याम्प अर्थात् डेरापुक पुग्यौं । त्यति चाँडै पुगेपछि के गर्ने भन्ने कुनै योजना थिएन । यसो बाहिर हेरेको दिउँसै छ । माथितिर अलिअलित मानिसहरु पनि हिंडिरहेका छन् ।
ठ्याक्कै हामी पुगेकै बेला भारतीय हिन्दू सद्गुरु आदित्य पनि त्यहीं पुगेका थिए । मैले राजन र मा जिहानलाई माथिसम्म पुगेर आउँ भनें ।
हाम्रो झोलाहरु टुर गाइडलाई हेर्न भन्दै हामी ५ जना माथितिर लाग्यौं । त्यो सानामा पढेको घनघस्याको उकालोको कथाभन्दा पनि कठिन उकालो थियो । त्यहीं हामी उक्लिन थाल्यौं । पहिलो १० मिनेटजतिमा नै कति माथि पो पुगिएला र ? भन्ने हुन थालेको थियो । अलिक मास्तिर पुगेर सुस्ताएको बेला हिमाञ्चल प्रदेशबाट आएका कमल देव शर्मा नामक तिर्थालुसँग कुरा भयो । उनी पनि पहिलो ग्लेसिएरसम्म पुगेर तीन घण्टा जति कुर्दा पनि बादल नहटेपछि फर्केछन् । हाम्रा टिमका सदस्यलाई मैले अलिक माथि जाउँ म घोर तपस्या सुरु गर्दछु त्यसपछि बादल हटिहाल्छ नि भन्दै हौस्याएर फेरि माथि चढ्न थाल्यौ । भाइ राजन र चिनिया मित्रले त लठ्ठी ल्याएका थिए । बाँकी अरुले तलै छाडेका थियौं । झण्डै एक घण्टाजति हिेंडेपछि भाइ राजनले भिनाजु भो अव त नजाउँ भन्न थाले । भोलि फर्किने हो भने अलिक माथि जाउँ भन्दै अघि बढें । म अलिक धेरै अघि बढिसकेपछि सबै उक्लन बाध्य भए । त्यसैगरी हामी माउन्ट कैलाशको पहिलो ग्लेसिएरमा पुग्यौं । हामी पुग्दा यस्तो रमाइलोगरी मुश्किलले १५ मिनेटका लागि घाम लाग्यो । माउन्ट कैलाशमाथिको बादलको घुम्टो पनि एक झल्कोका लागि यिनीहरुलाई अनुहार देखाइदिऊँ जसरी खुला भयो । यद्यपि चुचुरोको माथिको कालो बादलले अलिअलि छायाँ भने बाँकी नै थियो । सायद फेरि अर्को पटकका लागि बोलाएको पनि हुनसक्छ ।
त्यो हिम श्रृङखला आफैंमा विचित्रको भने अवश्य थियो । कतै महादेव शिवका दुई छोराहरु गणेश र कुमारको जस्तो आकृति, कतै बाघको छाला र नागको मालामा शीब भारतीय टिभी श्रृङखलाहरुमा देखाइएजस्तै आकृतिमा देखिएको जस्तो हातका पञ्जा उठाएर आर्शिवाद दिएजस्तो त कतै शिवका ठूला ठूला ढ्याब्रे पाउ जस्तो आकृति अवलोकन गर्दै हिमाली श्रृंखलामा त्यति चर्को घाम लागेका बेला बाक्ला ज्याकेटहरु फुकालेर कसैले कमिज त कसैले भित्री स्वीटरमा मात्र तस्वीर खिच्यौं । केही क्षणमा नै अकाश बादलियो । त्यति खुला र कञ्चन देखिएको माउन्ट कैलाश अलि लजाएजसरी वा चर्को घामबाट जोगिन हामीले हतार हतार अनुहार छोपेजसरी शिर छोपिहाले । तर हाम्रो रोमाञ्चकतामा हाम्रो टाउको दुखाई कहाँ हराएको थियो केही क्षण हामीले नै पत्तो पाएनौं । दुई जना भाइहरु र मलाई अधिक टाउको भने दुखेकै थियो । तर पनि त्यो रोमाञ्चकता । अथवा प्रकृतिको त्यो उचाइमा पुग्नु नै हाम्रो सफलता थियो । मनमनै मैले जीवनमा यति धेरै हण्डरठक्कर सँगै यति धेरै औषधि खाएँ, तर पनि मेरो मुटुको चालले सधैंभर मलाई साथ दिने भयो भन्ने विश्वासले मलाई भित्रैदेखि अरु बढी आत्मविश्वासी बनाएको थियो । गत वर्षमात्र म एकै रात चार पटक अचेत भएको थिएँ । त्यो क्रम गत मे महिनामा छेन्दु गएका बेला पनि एकपटक दोहरिएको थियो । तर पनि मेरो मुटुको चाल र मैलै गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट अव कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने निकै ठूलो विश्वास प्राप्त भयो ।
गत मे पहिलो हप्ता राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण टोलीमा आउँदा मलाई ल्हासामै गा¥हो भएको थियो । अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीसँग आउँदा पनि अधिक टाउको दुखाईका कारण मैले वेनचेन शो छाडेको थिएँ । ती घटनाले पनि एकपटक मानसरोबर र माउन्ट कैलाश पुगेरै हेर्ने भन्ने लगेकै थियो । मेरो यताको आगमनमा भित्रभित्रै शारदा र छोरी जेनी चिन्तित भएको जस्तो लाग्दथ्यो । शारदाको चिन्ता त प्रकट भएकै थियो । छोरीको अव्यक्त रुपमा चिन्ता मैले देख्न सक्थें । तर जेनीमा राजन, साजन मामा त जान आँटेका छन् भने ड्याडी किन नसक्ने भन्ने आत्मविश्वासको भाव पनि उनको अनुहारमा देखिन्थ्यो । हुन त सबैका छोराछोरीलाई आफ्ना बाबा ममीभन्दा ठूलो कोही लाग्दैन । त्यसमाथि पनि जेनीलाई विशेषगरी मेरो शक्ति र कमजोरी अरु बढी राम्रोसँग थाह छजस्तो मलाई लाग्छ ।
माउन्ट कैलाशको फेदको पानीलाई हिन्दू र बौद्धमार्गीहरुले पवित्र जल अर्थात होली वाटरका रुपमा अथ्र्याएका र व्याख्या गरेका थुप्रै सामग्रीहरु पढ्न र सुन्न पाइन्छ । पञ्च तत्व मध्ये पानी एक नभइ नहुने पवित्र तत्व अवश्य हो । तर कहाँको जल होली वाटर कहाँको पानी ननहोली वाटर हुन्छ भन्नेमा मलाई पनि त्यस्तो कुनै विश्वास लाग्दैन । यद्यपि हिमश्रृङ्खलाको कलकल बगिरहेको पानी पक्कै पनि सबैभन्दा बढी शुद्ध भने अवश्य नै हो । हामीले रमाइलोका लागि नै भए पनि एक बोतल पानी भरेर ल्यायौं । माथि चढ्दा त्यहींको पानी पटक पटक पियौं । ठाउँ ठाउँमा मैले अरु साथीहरुलाई पर्खिनकै लागि रमाइलो गर्न पनि ध्यान गरेको जस्तो गरेर चर्को चर्को स्वरमा ओम ओम ओम मन्त्रोच्चारण गरें । त्यहाँ चढ्ने तिर्थालुहरुले सुस्त सुस्त जय शिव शम्भो भनिरहेका हुन्थे । सामान्यत अल्ट्च्यिुडका कारण चर्को नबोल्नु भन्ने हुन्छ । तर म एकतातिर टेलिभिजनका लागि बोलिरहेको थिएँ, अर्को रमाइलोका लागि । त्यसमाथि स्वर बसेर एजिथ्रोमाइसिन औषधी खाएको चौथो दिन भएको थियो । बाक्लो, बाक्लो र पहेंलो कफ पनि आइरहेको थियो । तर दरिलो इच्छाशक्तिको अगाडि सायद धेरै कुरालाई हार मान्नु पर्दोरहेछ कि ?
हामी फस्ट ग्लेसिएरमा पुग्दा ६ किमी र फर्किदा गरी १२ किमी हिंडेछौं । त्यहाँको समुन्द्र सतहबाट झण्डै ५८०० मिटर उचाई रहेछ । त्यस दिन हामी २८ किमी दूरी पार गरेछौं । सामान्यतया त्यसो गरिनु निकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ । तल बस्ने स्थलमा आइपुग्दा त्यहाँको वातावरणले निस्सासिएर मर्नेजस्तो थियो । बल्ल थाहा भयो कि यति बेजोडले टाउको दुखेको रहेछ । पछिल्लो छ महिनादेखि मानिसको जीवनमा आइपर्ने सङ्कट जति सहने त रहेछ भन्ने धारातिर मोडिन थालेको थियो मेरो । त्यही सम्झेर औषधिको एक नियमित डोज मात्र खाएँ । भाइहरुलाई पनि त्यसै गर्न भनें ।
एउटा हलमा ४० भन्दा बढी मानिस । कोही घुरेका छन् । चिनियाहरु चुरोट पिइरहेका छन् । विभिन्न समूह बनाएर आएकाहरुले टुर गाइडप्रति गुनासो गरिरहेका छन् । कोही कोही त झगडा गरिरहेका थिए । राती दुई बजेतिर त्यो होटल भन्ने कि मेस भन्नेका सञ्चालक तिनको झण्डै १ वर्ष पनि नपुगको दुधे बालक र सञ्चालकका जोडीले मम बनाएर खाँदै थिए । म उनीहरुको चुलोनेरको खाटमा परेछु । मसँगै साजन र राजन थिए । उता मेरो खुट्टा पर्नेतिर मद्रासतिरका जोडीको खाट थियो । हामी तीन भाइ एक निमेष पनि झिमिक्क आँखा नगरीकन विहानको ७ बजायौं । विहान ५ बजेबाट कैलाश परिक्रमा गर्नेहरुको टोली हिंड्न थाल्यो ।
सार्वजनिक शौचालय यतिविघ्न दुर्घन्घित मैले जीवनमा कहिल्यै देखेकै थिइन । एकपटक त्यहाँ गएको झण्डै भमिट भएन । तर राम्रो के भयो भने मेरो टाउको दुखाईको औषधिको साइड इफेक्टले मलाई दिशा नै लागेन दुई दिनसम्म । त्यसले गर्दा त्यो सार्वजनिक शौचालयको नर्कबाट म बचें । भाइ राजन र साजनले कसरी सहे म अनुमान पनि गर्न सक्दिन ।
एकथरि ट्रेकिङमा रुचि हुनेहरु र धार्मिक रुपमा माउन्ट कैलाशको होइन कि महादेव शिवको परिक्रमा गर्न चाहनेहरुले मात्र त्यो परिक्रमा गर्दा रहेछन् । दारचेनदेखि दारचेनसम्म तीन दिनको समय लगाएर । त्यो क्रममा जोम्युला पास क्रस गर्दा ५७०० मिटर पार गर्नु पर्ने भएकाले हाइअल्ट्च्यिुडका हिसाबले अलिक जोखिम मानिदो रहेछ । डेरापुकभन्दा अघि बढेपछि कुनै सङ्कट आइलागेमा तत्काल आपतकालीन उद्धार गर्न सकिने अवस्था रहेनछ । तर डेरापुकसम्म त गाडी, एम्वुलेन्स पनि जाने सहज बाटो छ । तर हामीले त अघिल्लो दिनै दुस्साहिसक रुपमा ५८०० मिटर उचाइ चढिसकेपछि परिक्रमाको पनि कुनै आवश्यकता रहेन । चिनिया साथी पनि खुशी भए । उनी पनि मेरो आत्मविश्वास, मानिसहरुलाई अगुवाई गर्ने तरिका वा कला वा प्रोत्साहन देखेर चकित परेको बताए ।
विहान यसो हेर्छु त डा. रिता सिंह (जो मेरा बच्चाहरुकी पारिवारिक चिकित्सक र हाम्री साथी पनि हुन्) उहाँहरुसहितको चार जनाको टोलीले पनि त्यही हामीले जागाराम रुपमा विताएको टेन्टमा नै रात विताउनु भएको रहेछ । सुरुमा उहाँले चिन्नु भएन । मैलै नै डासाप कहिले भन्दै मेरो अनुहारका सबै मास्क र बस्त्र उतारेपछि छक्क पर्दै खोइ त शारदा भन्दै सोध्नुभयो । त्यहीं उहाँले अर्को रमाइलो सुनाउनु भयो, उहाँहरु मध्ये उहाँको श्रीमान एक्ले कैलाश पर्वत परिक्रमा गर्न एकैछिनमा हामीसँगै भएको बेलामा नै विदा भएर हिंड्नुभयो । तर अरु बाँकी तीन जना केही समय त्यहीं टहलिएर दारचेन फर्कने बताउनु भएको थियो ।
अघिल्लो दिन हामीलाई सस्र्युङ अर्थात् यमद्धारबाट डेरापुक पुग्न झण्डै ५ घण्टा लागेको थियो भने भोलिपल्ट फर्किदा हामी तीन घण्टामा फक्यौं । मेरो तरिकाले सबै हिंडेको भए हामी कम्तीमा सवा दुई घण्टामा फर्किसक्ने थियौं । तिव्तीयन अर्थात् त्यस क्षेत्रका बासिन्दा लागि घोडा पालन पनि राम्रो आम्दानीको स्रोत रहेछ । सँगसँगै याक अर्थात् हामीले नेपालमा भन्ने चौंरी गाई पालन अर्को राम्रो व्यवसाय रहेछ । याकले त पोर्टरको काम पनि गर्ने, दूध पनि दिने, त्यसमाथि सवैभन्दा पोषिलो मासुको समेत काम गर्ने जनावरका रुपमा लिइंदो रहेछ । भेडा च्याङग्रा पालनका बारेमा त नेपाल सदियौंदेखि नै जानकार रहँदै आएको छ । वर्षायामको समय भएकाले चौतर्फी संसारको छानो मानिने तिव्तीयन प्लेटोको उजाड रुप देख्नु परेन, बुकी र विभिन्न प्रजातिका फूलहरु फुल्न थालेका, विभिन्न थरिका चरिचरनका घाँसहरु उम्रिरहेको हरियाली समयमा हामीले यात्रा गर्न पायौं । तर पनि हिउँ पग्लेर कहिल्यै दाँत नमाझेको मानिस हाँस्दा देखिएका पहेंला दाँत जस्तै उजाड पत्थर र पहाडहरु भने आँखाले भ्याउनेगरी अवलोकन गर्न पायौं । मनमनै लाग्यो वैशाख जेठमा यो ठाउँ झन कति उजाड देखिंदो हो ?
कैलाश पर्वतबाट फर्केको भोलिपल्ट हामीले ४१२ वर्ग किमीमा फैलिएको झण्डै ३५० फिट भन्दा गहिरो मानिने ११० किमी लामो कोरा अर्थात ट्रेक गर्न मिल्ने बाटोबाट गाडी मार्फत् नै मानसरोवर तालको परिक्रम ग¥यौं । ठाउँ ठाउँमा झर्दैं पुरानै कथा होली वाटरसँग खेल्दै परिक्रमा ग¥यौं । त्यसक्रममा सर्लुङ गुम्वा र टुर्पो गुम्वाको अवलोकन ग¥यौं । सर्लुङ गुम्वामा रहेका पद्सम्भव बुद्ध मूर्तिको अवलोकन र स्पर्श समेत गर्न पायौं । एउटा टुर्पो गुम्वासँगै रहेको हिन्दू मन्दिरको समेत अवलोकन सहित मानसरोवरको अघाउनेगरी दृश्यावलोकन ग¥यौं । त्यस लगत्तै एउटा सानो गल्छेडोंले छेकेको अर्को ताल छ । जसलाई राक्षस ताल भनिन्छ । त्यहाँको पानीलाई छुन नहुने, त्यो तालमा माछा लगायत कुनै पनि मानिसले खान मिल्ने सामुन्द्रिक तत्व केही पनि नहुने विश्वास रहेछ । हामीले त्यसको अवलोकन मात्र ग¥यौं । त्यसको पनि हिन्दू र बौद्धमार्गीहरुका अलग अलग व्याख्या र मान्यता छन् । साझा मान्यता त्यो ताललाई राक्षस ताल भनिन्छ। मानसरोवर र राक्षस तालको सवै स्थानबाट माउन्ट कैलाशको पछाडिको भाग देखिइरहन्छ । टुर्पो गुम्वाबाट त मानसरोवर तालका पाँच फरक फरक रङ देख्न सकिन्छ । त्यो कवि कलाकारहरुका लागि निकै उपयोगी र प्रकृतिले नै कल्पनाशीलताको प्रचुर मात्रमा रङ घोप्टाइदिए जस्तो लाग्यो । बाँकी सबै भिडियो यात्रामा ।
चीनका उच्चतम विकासले किन छोएन त ?
सम्भवत माउन्ट कैलाश र मानसरोवरको यात्रा गरिसेकपछि सबैको मनमा चीनको भव्यतम् विकासको लहरले किनै अझै त्यो ठाउँलाई नछोएको होला भन्ने लाग्छ । त्यसको एउटै कारण तीव्वतको विशाल भूभाग, विचित्रखालको देवी देवताप्रतिको विश्वास, तुलनत्मक रुपले कम जनसंख्याका कारण नै त्यसो भएको हुनु पर्दछ । जिविकाका लागि ल्हासाभन्दा तलबाट नै आलु र पशुजन्य पदार्थ बाहेक सबै लैजानु पर्ने वाध्यताका बीचमा पनि आधुनिक विकास दोस्रो प्रथामिकतामा परेको हुनु पर्दछ । तर पछिललो समय सिगात्से सहर चीन, नेपाल, भारत, पाकिस्तान सहितको अन्तराष्ट्रिय व्यापारिक हव बन्न आइपुग्ने बदलिंदो अवस्थितिले बेइजिङको विकास माउन्ट कैलाशको फेदी वा परिक्रमा नगरी सुखै छैन । माउन्ट कैलाश आसपास र दारचेनका स्थानीय वासिन्दाहरुले दारचेन यस्तो होला भन्ने त कल्पनै थिएन भनेर आश्यर्च मान्दथे । अहिले दारचेनमा पाँच तारे होटल बन्ने तरखरमा छ । टेलिफोनको सा¥है राम्रो कनेक्टीभिटी लोभलाग्दो छ ।
माओको पालामा सुरु भएको सांघाई मैत्री राजमार्ग पूर्ण रुपमा माउन्ट केलाशको ५०० किमीजतिबाट पूरा भएको छ ।
Outlook-भाग २ || मदनको मार्गसिद्धान्त नेपाली राजनीतिको असाधारण उपयोगी भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ
मदनको मार्गसिद्धान्त नेपाली राजनीतिको असाधारण उपयोगी भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ
कालापानीमा भारतिय सेना यसरी बस्यो – सिमाविद् श्रेष्ठ